Global Voices teny Malagasy » Zeorzia: Napetraka ny New Media Forum, nisy ny tafatafa tamin’ireo bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2018 3:35 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Miranah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Taorian'ilay New Media Forum  vao haingana, nivoaka an-gazety teo an-toerana ny hetsika natao ho an'ny mpianatra sy ny matihanina amin'ny media tao Tbilisi, Zeorzia. Na dia tara mihoatra ireo mpifanolo-bodirindrina ao atsimon'i Kaokazy aza, mihamitombo ny fahalianana amin'ny tontolon'ny aterineto ary misy ny marika fa hiova be ny toe-draharaha amin'ny taona 2010, ary indrindra eo amin'ny sehatry ny media sy ny fiarahamonim-pirenena. Georgia Today nitatitra momba ny forum .
Nanao fampahafantarana tamin'ny hetsika ihany koa ny tonian-dahatsoratry Global Voices any Kaokazy, ary avy eo noresahan'ny Georgia Today  ihany koa.
Tamin'ny lanonana, nanadihady ireo bilaogera telo, Dodka, Dv0rsky sy Sweet ny Global Voices. Azo jerena antserasera ihany koa ankehitriny  ny tafatafa faharoa, tafatafa nataon'ilay manampahaizana momba ny media vaovao Poloney, Jakub Górnicki, izay nanatrika ny forum ihany koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/04/122241/
 New Media Forum: https://globalvoicesonline.org/2009/10/14/georgia-new-media-forum/
 nitatitra momba ny forum: http://www.georgiatoday.ge/article_details.php?id=7342&cat=Social&version=481
 noresahan'ny Georgia Today: http://www.georgiatoday.ge/article_details.php?id=7350&cat=Social&version=482
 Azo jerena antserasera ihany koa ankehitriny: http://kosmoshow.com/